Isku-hagaajinta Raadinta Lacagta Leh: Tusaalaha Safarka iyo Dalxiiska | Martech Zone
Haddii aad raadineyso gargaar ama khibrad raadinta lacag leh, ilo aad u badan ayaa jira Halyeeyga PPC, Daabacaad weyn halkaas oo Hanapin Marketing ay kula wadaagaan khibradooda. Hanapin ayaa dhawaan sii daayay muuqaalkan cajiibka ah, ee Tobanka Talooyin ee ugu sareeya PPC ee Suuqgeynta iyo Dalxiiska. In kasta oo kiiska adeegsiga uu yahay safar iyo dalxiis, talooyinkani waxay ku habboon yihiin suuq-geyn kasta oo raadinaya inay ku daraan hanaan habeynta raadinta ee lacag bixinta ee xeeladahooda PPC (Bixi Halki Taabasho).
Ayadoo 65% dadka safarka ah ee tamashlaha iyo 69% ee ganacsatada safarka ah ay dhahayaan waxay u jeestaan ​​shabakada si ay go'aan uga gaaraan sida ama meesha ay doonayaan inay u safraan, Hanapin Suuq geynta waxay u maleyneysay in muuqaal qurux badan oo la socda talooyin wax ku ool ah ay noqon doonto kheyraad iyo hage weyn oo loogu talagalay dhammaan safarka iyo dalxiiska. suuqleyda.
Halkan waxaa ah tilmaamaha ugu fiican ee Bixinta Raadinta Bixinta
Kala Sooc naftaada - Ku samee cilmi-baaris ku saabsan tartamayaasha 'ololaha PPC oo kala sooc ololahaaga xayeysiinta ah.
Ololeyaal Kala Duwan - Waa maxay meelaha laga yaabo in dhagaystayaashaadu raadsadaan? Bixi ololeyaal badan si loo tijaabiyo loona kala duwanaado waxyaabaha aad bixiso.
Goob-Bartilmaameed - U caddee goobaha gobollada ay khuseeyaan, haddii kale waxaad lumineysaa miisaaniyadda suuqgeynta raadinta ee lacag lagu siiyay.
Bartilmaameedka Maalintii iyo Saacadda - Hubinta in waxyaabaha aad bixiso ay muuqdaan markii rajadu u muuqato iyaga inay yeelan karto koror baaxad leh oo ku saabsan heerarka guji-u-beddelashada.
Kufiirinta ROI - Helitaanka taraafikada weyn way fiicnaan kartaa laakiin ma bixinayso biilasha. Falanqee oo diiradda saar ololayaasha keenaya dakhliga, maahan kaliya taraafikada.
Istaraatijiyadaha Dalbashada - Abuur istiraatiijiyado qandaraas ku saleysan ujeeddooyinkaaga ololaha. Wacyigelinta, wadaagista, taraafikada iyo beddelaadda ayaa dhammaantood fure u ah, laakiin kharash badan oo loo beddelo ayaa macno badan ka samaynaysa iibsashada taraafikada dalabyo aad u sarreeya.
Tayadoow Ololayaasha Muujinta - La soco meelaynta xayeysiiska oo ku habboon aragtida muuqaalka halkii aad ka isticmaali lahayd hal cabir oo ku habboon istiraatiijiyadda oo dhan.
Dib uhabaynta - Istaraatiijiyad kasta oo PPC waa inay lahaataa istiraatiijiyad dib-u-qiimeyn! Beegsiga booqdayaasha ku jiray bartaada iyo bidixda ayaa gabi ahaanba baari doona kordhinta sicirada.
Isticmaal Bing - 69% ganacsatada safarka ah waxay u weecdaan shabakada qabanqaabada safarka halka 71% taraafikada Bing ay gaar u tahay Bing (kuma xirna Google).
Tayaynta Bogagga Degista - Bogagga degitaanka ee weyni ma kordhinayso uun beddelaad, waxay sidoo kale keenaan dhibco tayo sare leh oo hagaajiya meelayntaada ad. Tayadoora bogaggaaga degitaanka!
Tags: hanapin suuq geynraadinta lacagta lehsuuq raadinta la bixiyayBixi halkii gujijeex jeexppcsuuqgeynta ppcpcherosuuq geynta raadintadalxiiskasafarka